Sakafo laxative: manafaingana ny fitetezana ny tsinay | Nutri Diet
Misy sakafo laxative maro ao amin'ny fizarana voankazo sy legioma ao amin'ny fivarotanao. Satria mety ho izy ireo tena mandaitra amin'ny fisorohana na fitsaboana ny fitohanana, tsy isalasalana fa ilaina ny fahalalana hoe iza izy ireo.
Laxatives voajanahary hanome fisondrotana ny fitetezana ny tsinainao izy ireo raha manome anao vitamina sy mineraly tena ilaina ho an'ny asa hafa izay mitranga ao amin'ny vatanao.
1 Fa maninona no maka laxatives voajanahary?
2 Infusions misy laxative vokany
3 Nahazo fibra ampy ve ianao?
4 Sakafo laxative ho an'ny sakafonao
5 Ny fomba fiainanao ve no mahatonga ny fitohizanao?
Fa maninona no maka laxatives voajanahary?
Ny fanafody laxative dia manome vahaolana haingana sy mahomby amin'ny fitohanana. Na izany aza, tsy tsara ny hampiasana azy ireo matetika satria afaka zatra ny vatana ny tsy fanatanterahana samirery ny tsinay. Raha fintinina, ny fanafody laxative dia mety hiteraka fiankinan-doha.
Ny mahasolo azy dia ny sakafo laxative, izay manampy ny fivalanan-tsinay handeha haingana kokoa ihany koa. Tsara kokoa ny fanesorana azy amin'ny fomba voajanahary sy mahasalama miaraka amin'ny fanampian'ny sakafo. Ka andramo aloha ny laxatives voajanahary.
Infusions misy laxative vokany
Topazo maso ny lahatsoratra: Infusions laxative. Raha tianao ny zavamaniry sy ny fanafody voajanahary, dia ho hitanao ao ireo akora maro misy fananana laxative.
Nahazo fibra ampy ve ianao?
Raha manana olana amin'ny fitohanana ianao dia ity no fanontaniana voalohany apetraka amin'ny tenanao. Ny fisakafoanana tsy misy fibre dia anisan'ny mahatonga ny fitohanana.
Ny habetsahan'ny fibre isan'andro dia 25 grama, na dia mety miovaova aza ny isa arakaraka ny lahy sy ny vavy na ny taonany. Tetika iray faran'izay tsara hahazoana bebe kokoa dia ny filokana amin'ny voam-bary manontolo sy ireo vokatra manondro fibra avo lenta kokoa amin'ny marika ataon'izy ireo. Na izany aza, afaka mahita fibre ianao amin'ny ankamaroan'ny sakafo izay teraka avy amin'ny tany. Ireto misy sasany amin'ireo legioma manankarena fibre indrindra. Aza adino ny mahazo ny fibrao avy amin'ny sakafo betsaka araka izay azo atao fa tsy mametra ny tenanao ho iray fotsiny:
Voahangy (miaraka amin'ny hoditra)
Ovy (miaraka amin'ny hoditra)
Apple (miaraka amin'ny hoditra)
Mitsimoka i Bruxelles
Marihina fa ny tombotsoan'ny fibre dia tsy voafetra amin'ny fandevonan-kanina. Heverina izany ity akora ity koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifehezana ny haavon'ny siramamy sy ny kolesterola, ary koa rehefa mampihena ny loza mety hitranga amin'ny aretim-po.
Sakafo laxative ho an'ny sakafonao
Ny olona sasany dia manana azy io matetika kokoa noho ny sasany, fa amin'ny ankapobeny, tsy misy olona azo antoka amin'ny fitohanana. Amin'izao fomba izao, angamba efa nanandrana ny sasany amin'ireto sakafo mangatsiaka ireto ianao:
Voafangaro amin'ny rano ny ankamaroany (ny tsy fahampian'ny H2O dia mety hanimba ny fitohanana), io voankazo io matetika no atolotra amin'ny tranga fitohanana noho ny fiatraikany malefaka. Izany dia vokatry ny sorbitol sy votoatin'ny fibre, akora manatsara ny fifindran'ny tsinay. Na vaovao, tsy ampy rano na miorina amin'ny arabe, ny plum dia tsy iray amin'ireo fanafody fitohanana voajanahary malaza indrindra sendra azy. Tena mandaitra.
Na dia misongadina indrindra amin'ny laxative voajanahary aza izy io, dia tsara ny manamarika fa ny plum dia voalaza fa fananana hafa tena mahaliana. Ny fikarohana dia manolotra azy a voankazo antioksida, antiseptika ary mahavoky (tsara ho an'ny fihenan-danja raha lanina amin'ny antonony).
Ny aviavy matsiro dia sakafo iray hafa misy vokany malefaka. Ny tsiambaratelo dia miorina amin'ny fitambaran'ny fibre sy maneziôma manolotra. Ho fanampin'ny fisorohana sy ady amin'ny fitohanana, ny aviavy koa dia manome angovo tsara. Amin'izany fomba izany, ny fampidirana azy amin'ny sakafonao dia mety ho hevitra tsara mandritra ny fotoana ilain'ny fitakiana ara-batana na ara-tsaina. Izy ireo koa dia heverina ho mahaliana ho an'ny olona manana kolesterola avo na tosidra.
Ny tsara indrindra hitazonana ny fifindran'ny tsinay tsara dia alao antoka fa manana sakafo laxative foana ianao ao anaty sakafo fa tsy manantona azy ireo raha tsy misy olana.
Ny fomba fiainanao ve no mahatonga ny fitohizanao?
Ny sakafo laxative dia mandaitra indrindra rehefa atambatra amin'ny fomba fiaina mahasalama. Ireto fanovana manaraka ireto dia afaka manampy anao hanana fihetsiketsehana tsinay tsara kokoa, na dia tsy mila mihinana karazana laxative aza ianao.
Raha tratry ny fihenjanana be ianao, ny sakafo dia afaka mihetsika tsimoramora amin'ny tsinainao. Raha izany dia, teknika fialam-boly hanampy anao hamaha ny olana izy ireo. Etsy ankilany, Ny tsy fahampian'ny fampihetseham-batana dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fifindran'ny tsinay. Aza hadino ny mijanona eo fotsiny ary manaova fanatanjahan-tena matetika raha mbola tsy nanao izany ianao. Ny fisorohana ny fitohanana dia iray amin'ireo antony maro hanombohana fiofanana.
Marihina fa ny aretina sasany koa dia mety hiteraka fitohanana, izay no antony maha maharitra azy (maharitra herinandro maromaro) na tonga miaraka amina soritr'aretina hafa (ao anatin'izany ny fihenan'ny lanja) dia tokony manatona dokotera ianao mba hanaovana fizahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Sakafo miadana